Ny iPad Pro vaovao misy 5G dia ho tonga amin'ny fararanon'ny 2020 | Vaovao IPhone
Ny iPad Pro vaovao misy 5G dia ho tonga amin'ny fararano 2020
Taorian'ny resabe Fanafoanana ny MWC Ny zava-drehetra dia toa manondro fa amin'ity taona ity isika dia hanana famelabelaran-kevitra lehibe mifandraika amin'ny 5G, teknolojia vaovao izay efa ampidirin'ny mpanamboatra maro fa tsy Apple ... Aza manahy, 5G dia ho tonga amin'ny iPhone, amin'ny fotoana mety rehetra. Ary toa izany 5G dia tsy tonga amin'ireo iPhones vaovao fotsiny, ny teknolojia fampifandraisana tsy misy tariby vaovao koa antenaina hahatratra ny iPad Proeny, tsy maintsy miandry isika mandra-pahatongan'ny fararano manaraka. Aorian'ny fitsambikinana dia manome anao antsipiriany bebe kokoa momba ity mety fanombohana ity.
Eny, manantena izahay fa hanana Keynote vaovao mandritra ny manaraka volana martsa izay anoloran'izy ireo iPad vaovao fa eto dia tena hahita fanavaozana voajanahary ny takelaka Apple isika, izany hoe endri-javatra vaovao, endrika vaovao, ary modely vaovao aza. Antenaina aza fa ny iPad aseho mandritra ny volana martsa dia hampiditra ilay fakantsary triple vaovao (ao anatin'izany ny sensor 3D vaovao natokana ho an'ny zava-misy mitombo) izay azontsika jerena ao amin'ny iPhone Pro, saingy hitohy amin'ny fifandraisana mitovy amintsika manana hatramin'izao. Fa raha irintsika a iPad miaraka amin'ny fifandraisana 5G dia mila miandry isika amin'ny fararano manaraka rehefa manavao am-pitandremana ireo modely ireo Cupertino hanomezana azy ireo fifandraisana 5G.
Fifandraisana izay ho tonga noho ny chip 5nm A14X izay hanana fanohanana Tambajotra 6GHz mmWave. Ity microchip vaovao ity dia mampanantena fifamatorana haingam-pandeha lavitra, manome ny vokatra tsara indrindra amin'ny faritra an-tanàn-dehibe. Ka tsy misy safidy afa-tsy ny fiandrasana hatramin'ny Oktobra izay antenaina hanambarana ireo fanovana ireo amin'ny Keynote natokana ho an'ny iPad aorian'ny fampisehoana tamin'ny volana septambra izay ahitantsika ireo maodely iPhone vaovao izay efa mampiditra ny modem miaraka amin'ny fifandraisana 5G.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Ny iPad Pro vaovao misy 5G dia ho tonga amin'ny fararano 2020
Ahoana ny fomba hahitana ny efijery iPhone amin'ny fahitalavitra miaraka amin'i Chromecast
WhatsApp dia mahatratra mpampiasa mavitrika roa tapitrisa manerantany